PatagoniaZvese zviripo - Kufamba, Mamiriro ekunze, Gwenga - Ajendina
kumisa sei iphone kubva pakutangazve
ipad mweya haina kutendeuka
sei kutenderera ipad yemhepo skrini
iphone 5s haibhadharise
iphone 6 screen chando chisingadzime
Patagonia iripi chaizvo?
Zvakanaka kana iwe ukabvunza veko chili vachati inotangira kuPuerto Montt yoenda kumaodzanyemba. Kana iwe ukabvunza veko mune Ajendina vachataura kubva kuSan Carlos de Bariloche akananga kumaodzanyemba. Saka ndiani akarurama? Zvakanaka, ivo vaviri vari. Patagonia inokomberedza zvese Chile neArgentina, kubva kunzvimbo idzi dzekutanga kusvika kumucheto kwekondinendi, anenge 3000km kumaodzanyemba.
Izwi rimwechete maChileans nemaArgentina vanobvumirana pamusoro pePatagonia iSOUTH. Paunotarisa pamepu inogona kunge isingaite kunge iri kure asi ngatiise mumamiriro epasirese; kana iwe ukatarisa mepu yenyika uye wotanga kutyaira kubva kumucheto kweAfrica kutyaira kumaodzanyemba kwehurefu hweCairns kuenda kuMelbourne, kana Paris kusvika pakati peRussia, kana New York kuenda kuLas Vegas, hausati waizokwana pamapu ne kupera kwe MaSouth America kondinendi. Muchokwadi, chinhu choga chinoenderera kumaodzanyemba ndeche Antarctica uye izvo chete 1000kms kubva kuSouth America's tip !!
Viva inonyanya kufarirwa Patagonia Tours :
Patagonia Yemusango : 27-mazuva epic rwendo isu tichafamba akanakisa eSouthern Argentina neChile. Tevera maAndes apo isu tichiongorora runako runoshamisa rwePatagonia pane ino inoshamisa nzira yerwendo!
Maodzanyemba Patagonia : Mazuva gumi nematatu kushanya uchiongorora kure kweSouth Patagonia, uchitsvaga mamwe epaki dzenyika dzakanakisa eSouth America
Yakakosha Patagonia : Mazuva matanhatu kuongorora Perito Moreno Glacier uye inoshamisa Torres Del Paine National Park
Patagonia yakawana sei zita rayo?
Tsananguro chaiyo yekuti zita rekuti Patagonia rinobva kupi haina kujeka. Vazhinji vanobvumirana zvine chekuita nekusvika muna 1520 kwekutsvagurudza kwePortugal Ferdinand Magellan.
Apo Magellan nevashandi vake pavakasvika muchikamu chekumaodzanyemba chekondinendi ivo vaiwanzo kuwana tsoka dzakakura pamhenderekedzo nenzvimbo dzakatenderedza.
Bigfoot inozivikanwa sePatagones muchiPutukezi uye saka Patagonia ichave iri nyika yemakumbo makuru. Runyerekupe rwehofori dzinotenderera nyika nekukurumidza dzakapararira. Zvino, izvi zvingaite senge chekare chevakadzi; hofori dzinotenderera nyika - zvakapusa sei. Nekudaro, panguva ino munhoroondo, zviuru zvevanhu vemo zvakatenderera nyika. Mamwe mapoka, kureva Selknam / Onas aive akareba zvakaenzana (1.8m-1.9m) zvine hukama nePutukezi kana Spanish (1.5m-1.6m). Ivo vaive vafambi / vanounganidza uye vaiwanzo gadzira bhutsu kubva mumitsipa yeguanacos. Bhutsu idzi dzaigadzira yakakura tsoka tsoka mujecha…. pamwe wakanganisa kunge hofori ??
Kutora inenge hafu ye chili uye chetatu che Ajendina rimwe izwi rauchazonzwa vanhu vazhinji veko vachitaura nezvePatagonia ndiGOGO kana hombe. Ivo havanyatsoita chero chinhu padiki diki zasi uko. Vane makomo makuru anoputika, makungwa makuru, mahombekombe makuru echando / nzvimbo dzechando uye mapaki makuru emunyika yakazadzwa nemakomo mahombe. Iyi inhandare yekutamba padanho hombe.
Chii chiri muPatagonia?
Maitiro Ekufamba kuPatagonia
Kune mashoma mabhaketi zvinyorwa izvo zvisingasanganisi hupenyu-hunoshandura rwendo kuburikidza nePatagonia. MuT + L's yakazara gwara, isu tinokuratidza maitiro ekuona masango, fjords, uye ingano glaciers.
Maodzanyemba ePatagonia, ayo anotenderera achiyambuka Chile neArgentina, agara achikwezva vafambi kuenda kune irikuda kusvika kumagumo epasi nemisoro yaro yakavezwa yakavezwa nezera remazera echando nenzvimbo dzinopopota. Pano, mumapaki emunyika, mune makomo ane chando, cobalt fjords, uye masango ekare-ekukura. Kumucheto kwekumaodzanyemba kweAmerica, icebergs inoputika nekutinhira kunoshamisa kubva kune yekare, mazaya makuru echando.
Torres del Paine National Park muChile neArgentina Los Glaciares National Park ndiwo akakwirira enharaunda, achikwezva mazana ezviuru zvevashanyi pagore. Zverwendo rwakakwana rwePatagonian, sanganisa kushanya kune mahafu ese enharaunda. Ehezve, kuita kudaro kunoda kuronga kwakanyanya-kunyanya panguva yemwaka mukuru. Heino yakazara tip sheet yekukubatsira kuti uwedzere mafambiro ako mukona iri kure yepasi.
MuEl Calafate neTorres del Paine, mahotera anowanzo shanda kubva kuSouthern spring kudonha (pakati paGunyana kusvika kutanga kwaMay). Kungogara kwekugara kushoma kwakavhurika gore rese, senge hotera yeExpplora.
Kuti udzivise vanhu uye uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinetseka Mwedzi yezhizha (Zvita-Kukadzi) ine mamiriro ekunze akapfava, asi ramba uchifunga kuti tembiricha hadziwanzo kupfuura madigiri makumi manomwe uye mhepo dzine simba.
Vafambi vanofanirwa kuziva kuti mamiriro ekunze muPatagonia haatombo fungidzira, kunyanya muchirimo uye kutanga kwezhizha. Mamiriro ekunze uye tembiricha zvinogona kuchinja pasina yambiro uye dutu rine hukasha rinogona kutsvaira kubva kuPacific. Izvo zvinobatsira kupeta purogiramu yako nemamwe mazuva ekuwedzera kana ukasangana nemamiriro ekunze asina kunaka.
Ungasvika sei ikoko
Sezvo madaro akakura kwazvo muChile neArgentina, uchafanirwa kubhururuka Patagonia (kunze kwekunge uine mavhiki akati wandei-emugwagwa). Zvigaro zvepamhepo zvinozadza nekukurumidza mukati memwaka wepamusoro (Zvita-Kukadzi), saka unofanirwa kutenga matikiti nekukasira pamberi sezvinobvira: Mwedzi mitanhatu yakanaka. Kwemamwe mwedzi mumwaka wakakwira (Gumiguru kusvika kutanga kwaMay), bhuku mwedzi mitatu kumberi kuti udzivise mari dzakadzika uye sarudzo shoma.
MuChile, LATAM Airlines inoshandira kumaodzanyemba kweChilean Patagonia gore rese kutenderera nendege dzezuva nezuva pakati peSantiago nePunta Arenas ine ndege inopfuura maawa matatu pakureba. Kutenderera-kutenderera fares inotanga kubva pamadhora zana nemakumi matatu kana ichitengwa pamberi.
Muna Zvita uno, ndege yendege inozivisa ndege mbiri-dzerwendo rwekufamba-famba (maawa matatu nemaminitsi gumi) pakati peSantiago nePuerto Natales. Dzosera ndege inomira muPunta Arenas. Iyo frequency ichawedzera kusvika ina vhiki nevhiki nendege munaNdira naFebruary, nemari inotangira pamadhora zana nemakumi matatu.
Mamiriro ekunze muPatagonia
Mamiriro ekunze muPatagonia haafano fungidzike nenzvimbo dzakasiyana dzemamiriro ekunze dzine tembiricha yakanyanyisa, zuva uye kunaya kwemvura. Vafambi vanofanirwa kuuya vakagadzirira zvakanaka kune ese mamiriro ekunze zvisinei nekuti unosarudza kufamba riini.
Ruzivo rwuri pazasi nderwe rondedzero yakajairika yezvakaita mamiriro ekunze zvichienderana nezvikamu zvese.
Munharaunda iyi mhepo dzekumadokero dzinotungamira uye, pamahombekombe kune anowanzoitika madutu egungwa. Mhepo yakanyatsooma, mvura inosvika kusvika gumi inches (250 millimeters pagore) uye hakuna chando. Iyo tembiricha yemvura yegungwa inofadza, nekuti tembiricha yemvura yegungwa inofadza, nekuti mhenderekedzo dzinogezwa nemucheto wekumaodzanyemba kwemvura inodziya yeBrazil.
Mamiriro ekunze anogona kutsanangurwa seiya yemupata wakaoma. Mvura inonaya iri pamasendimita masere kusvika gumi nemaviri (mazana maviri kusvika mazana matatu emamirimita pagore), pasina chando. Mhepo dzinobva kumadokero nekumaodzanyemba dzinenge dzakajairika. Iyo tembiricha yemvura yegungwa inotonhora zvakanyanya.
Pano gungwa nemakomo zvinobatsira kudzikamisa mamiriro ekunze. Munharaunda yeRwizi Grande mhepo dzinobva kumadokero dzinovhuvhuta paavhareji kumhanya kwe15.5 mph (25 km / h) nekuputika kunosvika ku124 mph (200 km / h), iine nguva shoma yekudzikama. MuUshuaia. mhepo yekumaodzanyemba kwakadziva kumadokero inotungamira, pa37 mph (59 km / h) avhareji yekumhanyisa nekuputika kunosvika 62 mph (100 km / h), asi iine nguva dzakadzikama dzakareba. Pedyo neBeagle Channel makore ane makore akajairika.
Mamiriro ekunze anoenda kubva pakanyorova kwazvo mumakomo kusvika kunyorova pakutanga kwenzvimbo. Mvura inosimba ichienda kumadokero, uye nekuvapo kukuru kwechando munguva yechando.
Iyo nzvimbo yemakomo-pre-makomo nemakomo nekuvapo kwemvura kuri kuwedzera uye kuwanda. Munguva yechando, kune sinou yakawanda uye nzvimbo dzemakomo dzinobatsira kudzikamisa mhepo.
Yakanakisa Nguva yekuenda kuPatagonia?
Zvinonzi nguva yakanakisa yekushanyira Patagonia iri mumwedzi yezhizha yaZvita kusvika Kukadzi asi unogona kufamba munzvimbo zhinji dzekuchamhembe kweChile neArgentina gore rese. Mwaka mukuru uri muna Gumiguru-Kurume kana avhareji yemasikati iri pakati pe65 ° F muzuva kusvika pasi pe40 ° s.
Zhizha (Zvita, Ndira & Kukadzi):
Isu tinokurudzira zvikuru kushanyira Patagonia munguva yezhizha (Zvita kusvika Kurume), sezvo iri nguva inodziya yegore, hongu, ine avhareji tembiricha yakakwira yakatenderedza 15 ° C asi panguva ino mhepo ine mukurumbira ndiyo yakasimba kwazvo uye inogona kusvika pamusoro pe120. mamaira neawa. Kushanyira Patagonia mukati memwedzi iyi kuchakupa mubairo nemamiriro ekunze akanak. Kunyangwe muzhizha iwe uchakwikwidza nemapoka anorema panguva ino yepamusoro. Mwedzi yakatangira uye inotevera nguva yezhizha ine kukwezva kwayo.
Kuwa (Kurume, Kubvumbi naMay):
Kuwa mibairo vafambi vane akanakisa mavara se muti s vanotanga kudurura mashizha avo emwaka unouya wechando, asi mhepo dzichiri dzinogona kunge dzesango - dzinowanzove dzisina kusimba.
Ino inguva inofadza yekuenda kutora mifananidzo yemhuka dzesango uye nharaunda uye kushamisika nePatagonia's inoshandura hupenyu hwemiti. Mhepo haina kusimba sezvairi muchirimo, uye ese mahotera mitengo uye mapoka ezhizha anotanga kudzikira. Kukwirisa kwemazuva ese kunowira mumakumi mana nemakumi mashanu, zvichigadzira mamiriro akasununguka ekutsvaga.
Iyo Patagonian Desert inotambanuka ichipfuura nharaunda ye673,000 mativi emakiromita mune yekumaodzanyemba kwenzvimbo yeArgentina uye zvikamu zveChile. Gwenga, iro rinozivikanwa sePatagonia Steppe kana Magellanic Steppe, rakasungwa nePatagonian Andes kumadokero, Atlantic Ocean kumabvazuva, uye Rwizi rweColorado kuchamhembe. Kunyangwe iyo Strait yeMagellan inogona kutaridzika semuganhu wekumaodzanyemba kweiri renje, iwo mamwe magwenga erenje anowedzera achienderera pasi kupinda munzvimbo yeTierra del Fuego. Iwo maficha epasi pePatagonian Desert akapamhama uye akasiyana, akaverengerwa netafura, masififasi, mipata, canyon, uye nyanza dzemvura yechando.
Dunhu rePatagonian raigara nevavhimi-vatanhi kubvira kare kare. VaIndia veTehuelche ndivo vaive vagari vepakutanga venyika ino, uye kune misha pano ingangodaro yaivepo makore mashanu nemazana apfuura. Guanaco uye rhea yaive mhuka dzakakosha kwazvo dzinovhimwa nemadzinza ekare. Gare gare, kutanga maSpanish, kozoti maChirungu, vakaedza kumisikidza dzimba dzekugara pamwe chete nedunhu rePatagonian mumahombekombe mukupera kwema18 uye kutanga kwezana ramakore rechi19, asi kusimba kwenzvimbo idzi kwakatadza kuvapo.
Makore mushure merusununguko rweArgentina, maIndia ekuzvarwa akadzingwa mudunhu rePatagonian panguva yeKukundwa kweDesheni Campaigns muma1870 akaitwa nevaEuropean. Vagari vatsva ava vaigara munzvimbo iyi kuti vashandise hupfumi hwayo hukuru hwezvisikwa, kusanganisira zviwanikwa zvemaminerari mudunhu iri. Kurima kwemhuka zvakare kwakagamuchirwa senzira yekuraramisa nevagari vatsva vanogara mugwenga.
Iyo Patagonian Desert inokwezva huwandu hukuru hwevashanyi gore rega rega kuArgentina. Kuvapo kwezvisingawanzo, zvakasarudzika, uye zvinowanzoitika zvinomera nemhuka, zvichisanganiswa nerakaoma, runako rwemusango wePatagonian nharaunda, zvakasimudzira kugadzirwa kwenhamba huru yemapaki emunyika, uye aya ari kushanda senge makuru ekushanya. Masayendisiti masayendisiti uye mageologist vanoshanyirawo nzvimbo kuti vadzidze ecology, glaciology, uye hupfumi hwezvicherwa zvegwenga iri.
Iyo steppe zvinomera zvegwenga zvinotsigira nharaunda hombe yezvipfuyo, kunyanya makwai, ayo akarererwa nevarimi vanochengeta vanogara uye vanoshanda mudunhu rePatagonian Desert. Peaches, maarumondi, alfalfa, madate, maorivhi, uye mazambiringa zvimwe zvezvirimwa zvakakosha zvinotengeswa pano. Iyo Patagonian Desert zvakare inochengetera makuru emamineral reserve esimbi ore, manganese, uranium, zinc, mhangura, uye goridhe.
WAIZVIZIVA HERE KUTI…
- Bariloche anogara kumahombekombe kweahombe 65,000 mahekita Lake Nahuel Huapi. Zvinonzwisisika kuti iri nyanza musha kune kull gull uye cormorant ane maziso ebhuruu ayo ari chaiwo shiri dzegungwa
- Gungwa Nahuel Huap ndiri kumba kuHuemul Island. Muma50s Arg muchivande akaedza kuvaka yepasi rose nyukiliya fusion reactor.
Chirevo chenhema chekubudirira chakakonzera nyika dzese ???? pamusoro pekutsvaga kwekusanganiswa.
- Nharaunda diki yemuno yeMapuche padhuze neLeleque, Argentina iri mukurwa kwenguva refu zviri pamutemo nekambani yenyika dzezvipfeko Bennetton pamusoro pekodzero dzevhu.
- Muna 1895 zvisaririra zvakachengetedzwa zvakanaka zveMilodon zvakawanikwa mubako padhuze Puerto Natales muChile. Mhuka iyi yaive yakapetwa ruviri pakureba kwemunhu nemuviri webere rine griza, muswe wekangaroo nemaoko uye kumeso kwembira.
- Iyo Yakarembera Glacier yeQueulat National Park muChile iri zvakare musha kune churu chine maziso mana.